Sidee farduhu u seexdaan? Adoo taagan ama jiifa? | Fardaha Noti
Farduhu, sida xayawaanka oo dhan iyo gaar ahaan naasleyda, waxay u baahan yihiin inay nastaan. Laakiin haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aan waxoogaa yeelano, waxaa hubaal ah inay jiri doonaan shakiyo badan oo innagu habsada sida ay u seexdaan.
Haddii aad rabto inaad si fiican u daryeesho, adoo siinaya amniga ay u baahan yihiin inay seexdaan, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso maqaalkan oo aan ku sharxi doono sidee farduhu u seexdaan.
1 Immisa saacadood ayuu farasku seexdaa maalintii
2 Maxay farduhu u seexdaan iyagoo taagan?
3 Farduhu ma riyoodaan?
Immisa saacadood ayuu farasku seexdaa maalintii
Si ka duwan finiin, oo ah ugaadhsade, sidaa darteedna, si hufan u seexan kara saacado (sida xiisaha loo qabo in la yiraahdo libaaxa qaangaarka ah ee sida wanaagsan u quudanaya wuxuu seexdaa 24 saacadood ... ama ka badan, iyo libaaxa ilaa 18 saacadood), farduhu ma seexdaan. Waxay ku siin karaan raaxadaas iyagoo ah xayawaan ugaadhsade. Sababtaas awgeed, badiyaa markaan aragno iyagoo taagan ama jiifa, oo sida muuqata hurda, dhab ahaan waxay ku taagan yihiin suulasha.
Haddii aan tan tixgelinno, way adag tahay in la ogaado inta saacadood ee ay seexdaan, maaddaama ay sidoo kale wax badan ku xiran tahay da'dooda (dadka da'da yar waxay ka seexdaan dadka waaweyn) Laakiin guud ahaan waxaan ognahay inay seexdaan waxyaabaha soo socda:
Potro: naso saacad badhkeed midkiiba maalintii.
Laga soo bilaabo lix bilood: 15 daqiiqo saacaddii.
Dadka Waaweyn: 3 saacadood ayaa ku faafa maalintii oo dhan.
Maxay farduhu u seexdaan iyagoo taagan?
Si looga fogaado in si fudud loo ugaadhsado, farduhu waxay soo saareen nidaam anatomical ah oo addinka ah oo lagu hayo xiisad. Qalabka taageerada isdhaafsiga ayaa u oggolaanaya iyaga inay ilaashadaan addinka oo la kordhiyo dadaal yar iyada oo ay ugu wacan tahay isku darka saxda ah ee jilicsanaanta iyo jilicsanaanta. Waqti ka waqti ayay xayawaanku ku beddelaan lugta fidsan lugta jilicsan.
Laakiin marka laga reebo hurdada oo istaaga, sidoo kale waxay sameeyaan iyagoo jiifa. Dabcan, waa dhif iyo naadir, laakiin haddii ay dareemaan raaxo iyo nasasho aad u weyn ayay dhulka seexan doonaan si ay u nastaan.
Farduhu ma riyoodaan?
Runtu waa tan haa, inta lagu jiro marxaladda REM, laakiin marna ma ogaan karno waxa dhabta ah ee ay ku riyoodaan. Laakiin sidoo kale, aad ayey muhiim u tahay inaan u oggolaanno inay nastaan, maxaa yeelay haddii kale caafimaadkooda iyo xitaa noloshooda khatar baa ku imaan kara.
Sideed u aragtay mawduucan? Xiiso leh, sax? 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Noticias » Sidee farduhu u seexdaan?